“Man United uma tartami doonto hanashada Premier League inta uu joogo laacibkan” – Roy Keane – Gool FM
“Man United uma tartami doonto hanashada Premier League inta uu joogo laacibkan” – Roy Keane
(Manchester) 28 Luulyo 2020. Kabtankii hore kooxda Manchester United iyo xulka qaranka Ireland ee Roy Keane ayaa sheegay in Red Devils ay tahay inay raadiso goolhaaye ka fiican David de Gea, haddii ay dooneyso inay u tartanto hanashada horyaalka Premier League.
Waxaa jiray baaqyo waaweyn oo ku saabsan in David de Gea laga saaro kooxda kaddib qaladaadkii uu sameeyay inta lagu jiray kulankii semi-finalka FA Cup ay guuldarrada ka soo gaartay Man United naadiga Chelsea.
Haddaba Kabtankii hore kooxda Manchester United iyo xulka qaranka Ireland ee Roy Keane ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waligey taageere weyn uma noqon goolhayaha reer Spain”.
“Waxa uu sameynayaa khaladaad fara badan ee Manchester United ku keeni kara inay lumiso dhibco muhiim u ah”.
“Haddii Man United ay rabto inay u tartamto hanashada horyaalka Premier League, waxay u baahan tahay goolhaaye ka fiican” ayuu yiri Roy Keane.
“Willian wuxuu labo dalab ka helay horyaalka Premier League” – Wakiilkiisa